Canada: Musha unogara vanhu verudzi rwechiInuit wekuKangirsuk iri muQuebec nechekuchamhembe
Kusvitsa Mashoko Akanaka Kuvanhu Vese vekuCanada
Pari zvino vhidhiyo inonzi Nei Uchifanira Kudzidza Bhaibheri? yakashandurirwa mumitauro 8 yekuCanada kuti ishandiswe pakubatsira vanhu vari mundima yebazi reko.Pamushandirapamwe wemazuva 10 wakaitwa muna October 2014 kuNunavik Arctic, vhidhiyo yacho yakaratidzwa vanhu mumutauro wechiInuktitut panenge paimba yega yega mumatunhu 14 ane vanhu vanopfuura 12 000.
Maneja Akabayiwa Mwoyo
Muna September 2014, kuSouth Korea kwakaitwa gungano renyika dzakawanda munhandare yeSangam World Cup Stadium iri muSeoul. Vanhu vanopfuura 56 000 vakanakidzwa nepurogiramu yegungano racho. Maneja wenhandare yacho akaomeswa mate mukanwa nekuzvibata kwaiita Zvapupu uye kuteerera kwazvaiita mirayiridzo mazuva egungano racho. Akati: “Munhu wese aiva netsika dzakanaka. Ndakashamiswa pandakaona vachichenesa nhandare kutopfuura zvinoitwa nevashandi vedu. Ndinongoti dai vashandi vedu vakanyatsoitawo basa ravo nemwoyo wese saizvozvo. Kana tichida kunyatsonamata, tinofanira kuita seZvapupu zvaJehovha.”
South Korea: Gungano renyika dzakawanda rakaitwa kuSeoul muna 2014
Jehovha Akavadzidzisa Mapinduriro Avaifanira Kuita
Muna May 2012, hurumende yeSweden yakaramba chikumbiro chakaitwa neZvapupu zvaJehovha chekuti zvipindewo paurongwa hwehurumende hunobatsira machechi, hwakadai sekudzikisirwa mari dzemutero. Dare Rinotungamirira rakapa mvumo yekuti nyaya yacho ikwidzwe kuDare Repamusorosoro reSweden.
Dare racho rakati raida kunzwa nyaya yacho kubva kumativi ese risati rapa mutongo waro. Hama dzinobva kunyika dzakasiyana-siyana dzakaungana kuti dzione kuti dzingapindura sei mibvunzo yaigona kuzobvunzwa paizokurukurwa nyaya yacho. Dzakaitira musangano wacho paImba yoUmambo yemuStockholm.
Hama dziri pakati pokudzidzira kuti dzichapindura sei, dhoo repaImba yoUmambo rakagogodzwa. Imwe hama yakavhura dhoo racho uye yakabva yaona vasikana vaviri, mumwe aiva nemakore 13 nemumwe aiva ne14 uye vakataura mazita avo. Vakabva vati vaida kubvunza mibvunzo yaiva nechokuita neZvapupu zvaJehovha. Hama yacho inoti, “Ndakamboda kuvaudza kuti vazouya rimwe zuva sezvo tainge takabatikana uye tisingade kuvhiringidzwa.”
Zvisinei, hama yacho yakazongotaura navo. Vasikana vacho vakabvunza mibvunzo yakawanda uye mimwe yacho yaiva nechokuita nenyaya dzemararamiro edu uye kuvhota panguva dzesarudzo. Pashure paizvozvo, hama yacho yakadzokera kwaiva nedzimwe hama uye yakadziudza nezvemibvunzo yakanga yabvunzwa nevasikana vaya uye kuti yakanga yapindura sei.
Zuva rakatevera, hama dzakashamisika paikurukurwa nyaya iyi nekuti mibvunzo yakawanda yakabvunzwa neDare racho yainge yakafanana neyakanga yabvunzwa nevasikana vaya. Hama yaimiririra sangano yakati: “Ndainzwa ndakagadzikana chaizvo kunyange zvazvo ndaigona kutya nekuti ndaitaura ndiri pamberi pemagweta anoremekedzwa chaizvo munyika. Asi ndakaona kuti Jehovha akanga atoratidza kuti anesu nekuti zuva rakanga rapfuura racho ainge atidzidzisa mapinduriro ataifanira kuita.”
Dare racho rakabva rapa mutongo richititsigira, uye nyaya yacho yakadzorerwa kuhurumende kuti ichinje zvayakanga yataura.
Saga raKen Remupunga
Ken, uyo ane makore 6, anogara kuHaiti. Akafara chaizvo paakaziva kuti ungano yavo yakanga yava kuzovakirwa Imba yoUmambo. Akabva agadzira bhokisi rake remupiro ndokuriviga mumba make. Paaipiwa mari nevabereki vake yokuti anotenga zvaanoda kuchikoro, Ken aiisa mari yacho mubhokisi rake. Akaramba achiisa mari yacho kusvikira pakazouya boka rokuvaka Dzimba dzoUmambo kuti ritange basa. Akabva avapa bhokisi riya, iro rakanga rava nemari yaikwana kutenga saga remupunga. Mupunga waKen wakadyiwa kwemazuva akawanda pazvokudya zvemasikati panzvimbo yaivakirwa Imba yoUmambo.
Mukuru Mukuru Wemasoja Anoudza Munyori Zvekuita
Kwemwedzi yakawanda gore rapera, munhu aitofanira kutanga awana mvumo yokupinda munzvimbo dzemuSierra Leone dzakanga dzisingabvumirwi kuenda nemhaka yechirwere cheEbola chaivako. Somuenzaniso, vatariri vematunhu vaitofanira kutanga vapiwa mabheji uye mapepa emotokari kuti vapinde munzvimbo dzacho uye ndizvo zvaifanira kuitwawo nevaya vaitakura mabhuku edu netsamba. Vari muDare Rokubatsira Panoitika Njodzi vaifanira kuendesa zvokudya, sipo dzinouraya utachiona nemathermometer anotora tembiricha usina kubata munhu. Chinoshamisa ndechekuti hama dzaigara dzichiwana mapepa acho aidiwa.
Zvakaitika pane imwe nguva zvaisimbisa chaizvo kutenda. Hama dzakaendesa gwaro raiva nechikumbiro chemabheji 34 nemapepa 11 emotokari, asi dzaifanira kuonana nemukuru mukuru wemasoja kuti abvumire chikumbiro chadzo. Hama mbiri dzakabva kuhofisi yebazi dzakaonana nemukuru mukuru uyu pazuva radzaitarisira kupiwa mabheji nemapepa acho. Asi gwaro raiva nechikumbiro chacho rakashayikwa. Hama dzacho dzakanzi dziritsvake dzega pamirwi yemapepa aivapo, asi dzakarishaya. Panguva iyoyo mukuru mukuru uya akaudza munyori wake kuti akanga ava kuvhara hofisi yake uye kuti haasi kuzotarisa zvikumbiro zvevanhu kusvika papera mavhiki maviri. Chinyararire, hama dzakabva dzanyengetera kuna Jehovha nemwoyo wese dzichimukumbira kuti adzibatsire. Mukuru mukuru wacho akatarisa hama dzacho akadzibvunza kuti, “Saka muri kuda mabheji nemapepa emotokari mangani?” Paakaudzwa nhamba yacho, akasimuka pachigaro chake achibva ataura nezwi rine simba achiti, “Ese ayo!”
Hama dzakamutsanangurira nezvebasa redu uye kuti zvinhu zvedu zvokuyamura zvaizoshandiswa sei pakubatsira panyaya yeEbola. Mukuru mukuru wacho akamboti zii ndokuzotarisa munyori wake achibva ati, “Vape zvese zvavari kuda.”
Guinea and Sierra Leone: PaDzimba dzoUmambo dzese pakaitwa urongwa hwekuti vanhu vageze maoko